မင်္ဂလာဒုံရှိရောင်းရန်စက်မှုဇုန်များ | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10162824 အတွက် Soe Kabar Real Estate Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10169177 အတွက် Land And Houses Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
58,500 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10168466 အတွက် Land And Houses Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10157000 အတွက် Pearl Real Estate Group သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်လိုသူ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စက်မှုဇုန်မြေကွက်ကျယ် ရောင်းဖိုရှိပါတယ်။...
31,000 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10152823 အတွက် နေ့သစ်ရန်ကုန် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10152425 အတွက် ေစာေရာဘတ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
31,500 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10151727 အတွက် WINNER ESTATE. & GENERAL SERVICES သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
WINNER ESTATE. & GENERAL SERVICES ပိတ်ရန်
င်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် မြေအကျယ်အဝန်း (0.686 Acre) (230' x 130') အရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10150392 အတွက် Pearl Real Estate Group သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
(2.5 ဧက)အကျယ်၊ မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန် ရှိ ပေကျယ်ကျယ် ဂိုဒေါင် ငှားရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10147889 အတွက် Land And Houses Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10139631 အတွက် Aung Kabar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Aung Kabar Real Estate ပိတ်ရန်